कस्तो खानेकुराहरुले स्मरणशक्ति बढाउँछ ? | सुदुरपश्चिम खबर
बदाममा भिटामिन ३ प्रचुरमात्रामा पाइन्छ । यसले मस्तिष्कमा फाइदा पु¥याउँछ साथै स्मरण क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
संकट हटाउन कुन राशीका व्यक्तिले के गर्ने ? जन्नुहोस् !!